साहित्यकार साथै गितकार गजलकार तेन्जु तामाङ् योन्जन सँगको साहित्यिक भलाकुसारी, - Entertainment Khabar
साहित्यकार साथै गितकार गजलकार तेन्जु तामाङ् योन्जन सँगको साहित्यिक भलाकुसारी,
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २७, २०७५ समय: २०:२१:३४
साहित्य जगतको यो भूमिमा मानवको अन्तस्करण आत्माबाट जीवन्त बनाउँने एउटा कलमी आवाजलाई साहित्य भनिन्छ । साहित्यकोे परिभाषा अलगै रहेपनि साहित्यकारहररुले आफ्नै तरिकाबाट वर्णन गरेको पाइन्छ । समाजलाई असल मार्गनिर्देन तर्फ डो¥याउन सहयोग गर्ने एउटा पारदर्शि गोरेटोको पाटो पनि हो । आज यहि साहित्य जगतले सारा सँसारलाई एक सुत्रमा बाँधिएको सत्य तथ्य छदैछ । यो क्षेत्रमा विभिन्न विधा र परिधी भएपनी, तिनीहरुको आ–आफ्नै बिशेषता र गुण आफुँभित्र लुकेर रहेको छ । सहित्यको विधामा कलम चालेर लाखौ लेखकहरुले आवाज बुलन्द गरेर समयको माग सँगै साहित्यले फड्को मारेको ईतिहासमा सर्वविदितै छ । साहित्यलाई आफ्नो जीवनको अमूल्य पेशा बनाएर बाँच्नेको एउटा भिन्नै धरातल पनि रहेकोछ । तर पनि राज्यले यस्को वास्ता नगर्नु ठूलो चुनौती को विषय रहेको छ । साहित्यमा नै जिवन सर्मपण गरेर जीवन्त सम्म कलमी आवाज पस्कने साहित्यकरहरुको जीवन्त जीवितै रहेको पाईन्छ । यहि उपदेशको पाटोलाई साहित्यमा आत्मासाथ गरी साहित्यको विधामा कलम चलाईरहनु भएका लाखौ साहित्यनुरागीहरु छन् । यो अहिलेको बर्तमान र पछिल्लो समयमा समस्त मानवजातीलाई साहित्यले छोएको राम्ररी देख्न र सुन्न पाईन्छ । त्यसमा पनी अहिले साहित्य जगतमा गजल बिधाले हरेक आँखाको परिधिभित्र गाजलको सौन्र्दयमा रमेर मानिसहरुलाई लठ्याएको छ । आजको यस साहित्य स्तम्भ अन्र्तगत हामी साहित्यको फाँटमा रहेर साहित्य तथा गजल बिधामा बिगत २१ बर्ष अगाडीबाट कलम चलाईरहनु भएका खोटाङ जिल्ला दिपरुङ चुईचुमा गाउपालिका – ६ बासतलामा बि.स २०२९ सालमा जन्मनु भएका साहित्यकार साथै गजलकार तेन्जु तामाङ् योन्जन सँगको आजको भेटमा म प्रदिप राई साथमा केही गजल भलाकुसारीहरु ।
१, योन्जन जि, तपाईंलाई आजको भलाकुसारी जम्काभेटमा स्वागत छ ?
–: धन्यवाद प्रदिप सर आजको जम्काभेटमा कुरागर्न पाँउदा म ज्यादै खुशी छु म जस्तो साहित्यमा सिकारु सिक्दै गरेको बच्चालाई यस्तो स्तम्भमा आउँन पाउँदा कृतज्ञताका साथ तपाइ लगायत तपाइको यूनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२, योन्जन जि, साहित्यले आफै आफ्नो बिशेषता बोलेपनी तपाईको बिचारमा साहित्य के हो ?
३, योन्जन जि, सिङगो साहित्यकार र गजलकारमा कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
४, योन्जन जि, तपाईको सोचाईमा साहित्यले साच्चीनै समाज परिबर्तन गर्छ ?
५, योन्जन जि, अब हामी तपाईको बिगततिर लाग्छौ, तपाई यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो कसैको प्रेरणा अथवा तपाईको रहर हो गजलकार बन्नु ?
६, योन्जन जि, गजल के हो? र यो कसरी लेखिन्छ ? र तपाईको सोचमा गजलकोे लक्षितबर्ग को हुन् ?
७, योन्जन जि, भनिन्छ बाँच्नको लागी आर्थिक श्रोत चाहिन्छ कतीपय गजलकारहरु यहि समस्याबाट पिडीत भईरहेका हुन्छन्, उनीहरुको गजलमा निखारता नभएर की बजार लिन नसकेर यो भईरहको हुन्छ ?
८, योन्जन जि, अहिले, सबैले गजल लेख्ने, प्रसारण, प्रकाशन गर्ने र कत्तीले त हु—बहु अरुको सारेर आफ्नो नाम कमाईरहेको पाउँछौ नि ? यसले सर्जकलाई सम्मान होईन अपमान भएन र ? साहित्यको फाँटमा यसमा ध्यान कसको जानुपर्छ नि ?
९, योन्जन जि, अहिले तपाई एकजना गजल बिधामा रहेर साहित्यलाई अगाडी बढाईरहनुभएको छ, तपाईजस्तै अन्य बिधामा रहेर साहित्य सिर्जना गनुहुने साथीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
१०, योन्जन जि, अन्त्यमा, गजलमा के हुनुपर्छ र के को अभाव छ ? गजलमा कलम चलाईरहनु भएको अवको ५ बर्षपछि हामी कस्तो अवस्थामा तपाइलाई साहित्यको क्षेत्रमा पाउन सकिएला ?
–: धनयवाद त मैले, तपाइ र तपाइको यूनिटलाई दिनुपर्ने हो किनकी साहित्यको विशाल सागरमा म जस्तो साहित्यकार लाई भलाकुसारी लिएर तपाइहरुको अमूल्य समयलाई खर्च गरेर म सङ्ग संवाद गर्नु भएकोमा । धन्यवाद । शुभ साहित्य ।